Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan xogta aad ku ah phone jir Nokia in a phone Nokia Windows. Inta badan siyaabo waxay leeyihiin tallaabooyin aad u tiro badan oo ku jira sidaas daraaddeed aan lagu kalsoonaan karin. Bal aan eegno labo ka mid ah habab iyo sidoo kale faa'iidooyin iyo khasaare. Waa waxaan rejeyneynaa in aad awood u yeelan doonaan in la helo hab u habboon baahidaada.
1. Isticmaalka macmiilka PC ah in ay beddelaan xogta aad
2. syncing Data si toos ah uga One phone in kale
3. Transfer Xogta laga Nokia in Windows Phone Effortlessly
Habka Mid ka mid ah: Isticmaalka macmiilka PC ah in ay beddelaan xogta aad
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo waa in aad xisaabta Microsoft qotomiyey-. Waad ka boodi kartaa talaabo haddii aad hore u leedahay xisaabta Microsoft ah. Waxaad hore u leedahay xisaabta Microsoft ah haddii aad tahay user Madaxweyne Siilaanyo Oo ah ama haddii aad account hotmail ah.
Haddii loo maleeyo in aad qotomisay xisaabtaada Microsoft. Tallaabada ugu horreysa waa inaad kala soo baxdo Suite Nokia ah haddii aadan hore u leeyihiin. Calan u Suite Nokia oo ku abuurtaan. Marka aad Suite Nokia si fiican u qotomiyey, raac tallaabooyinka soo socda si aad u raalli geliyaan SkyDrive.
• Riix qalab ka dibna geliyaan si ay u SkyDrive
• Next, riix Start
• In uu suuqa kala dhashay, dooran xogta aad rabtid in aad waafajinta in daruur. Waxaa muhiim ah in la xuso in sawiro oo kaliya la synced karaan haddii ay ku jiraan JPG, PNG ama GIF qaabab.
• Suite Nokia markaa ka codsan doonaan fasax si ay u helaan account SkyDrive aad. Tani waa halka aad u baahan doontaa in aad xisaabta Microsoft.
• Riix Haa marka aad gasho shubo xisaabta Microsoft.
• Your Data hadda lagu kaydiyaa account SkyDrive aad. Xiriirada aad la badbaadin doonaa Buuga SkyDrive iyo sawiro aad ku badbaadi doontaa album ah.
Si aad u buuxiso Log habka shubo xisaabta Microsoft Windows Phone adiga oo isticmaaleya. Data Waxaad markaas toos ah u bilaabi doonaa syncing dhex SkyDrive iyo aad demin doonaa xogta laga telefoonka Nokia in aad telefoon Windows.
The faa'iidada ah ee habkan
• Waxaa fudud in la sameeyo
• Ma soo qaato waqti aad u badan
• Marka aad tallaabo dhamaystiran hal, laba talaabo laftiisa soo Gabagabeysey badan
• Waxaa jira talaabooyin fudud aad u badan oo in la raaco
• Waxaa la ma fududa in la xasuusto oo dhan tallaabooyinka ay dhacdo in aad isku daydo in ay tan u sameeyaan iyaga oo aan hagaha
Habka Labaad: syncing Data si toos ah uga One phone in kale
Habkani oo gebi ahaanba ku tiirsan doonaa app ku saabsan telefoonka Nokia Lumia. Waxaa muhiim ah in si kastaba ha ahaatee la soco, in habkan ma shaqeyn doono haddii aad rabto in lagu wareejiyo aad taariikheed sawiro aad. Waxaa fiican ugu shaqeeya xiriirada iyo fariimaha.
Si aad u bilowdo inaad u baahan tahay inay ugu horreeya oo dhan download "wareejinta xogta aan" App ka Nokia dukaanka. Waa app lacag la'aan ah sidaa darteed waxaa jirta kharashka ku lug lahayn. Si aad u soo bixi App si raac tallaabooyinkan fudud;
• Riix icon dukaan ku saabsan telefoonka Nokia Lumia si ay u helaan suuqa Chine
• Marka aad dukaanka Nokia, guji "Apps ka Nokia" inay soo qaadaan barnaamijyadooda oo dhan waxaad ka heli kartaa dukaanka Nokia.
• hoos si aad u hesho app gaar ah. Waa "wareejiyo aan app Data."
• Marka aad ku yaala, Tubada waxaa iyo download it in aad telefoon
• Markaas Tubada ku button Lumia Home
• Kaadhkaaga bidixda halkaas oo Chine oo dhan waxay ku yaalaan oo la helo "wareejinta xogta aan" app in aad kaliya bixi.
• Marka aad ka helaysaan, tubbada si aad u abuurtaan app.
• Tallaabada xigta waa in ay awood u Bluetooth labada telefoonada iyo in la hubiyo in ay dhab ahaantii ka heli kartaa midba midka kale
• Tubada on Continue Tab ee "Bedelka aan Data" app. App wuxuu ku weydiin doonaa inaad u noqon on your Bluetooth incase ku yaal ma aha.
• Marka Bluetooth ayaa gagadin, telefoonka Lumia raadin doona telefoonka kale oo aad weydiisan kartaa in aad iyaga xubnuhu. Raac tilmaamaha Lumia idin siin doono, si ay u samaystaan ​​garab ee si guul leh.
• Si aad u bilaabaan kala iibsiga, Tubada telefoonka kale oo hadda aad u guurto kartaa xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah.
• Iyadoo ku xiran baaxadda xogta, kala iibsiga qaadan doonaa ilaa dhawr daqiiqo. Waxaa muhiim ah in aad u dhow la isku hayo labada telefoonada lagu jiro hanaanka wareejinta.
Hambalyo, aad u wareegeen xogta laga telefoonka Nokia in aad telefoon Windows.
• Uma baahnid in aad kala soo bixi software kasta si aad u computer ama xataa xirmaan mid ka mid ah telefoonada ah si aad u computer
• Waa quruxsan fudud si ay u raacaan ay jirto xaqiiqda ah in ay jiraan dhawr talaabo.
• app ayaa aad u baahan tahay oo gebi ahaanba bilaash ah oo aad si fudud la heli karo.
• Waxaa jira talaabooyin fudud aad u badan in ay tahay mid aad u fudud in meel laga badiyay dhexe
• Habka sidoo kale gebi ahaanba ku tiirsan tahay Bluetooth oo mararka qaarkood aad qalab Bluetooth mid ka mid ah telefoonada ma laga yaabaa in si wanaagsan loo wada hawl-
• Iyadoo habkan, waxaad kuma wareejin karaan sawiro ama jadwal aad taas oo aan waxtarka kuu lahaan haddii aad rabto in lagu wareejiyo entries jadwalka ama sawiro aad.
Labadan hab oo labada waxtar leh si user ah wuxuu noqon karaa inkastoo labada ay ku yeelan karaan ceebaha iyaga u gaar ah. Mid ka mid Habka ay u muuqataa mid aad u wanaagsan dhammaan noocyada xogta inkastoo adayga habka laga yaabaa in jeedin ah off in badan. On habka gacanta kale laba shuqullada sidoo haddii aadan rabin in aad isticmaasho PC inkastoo aad runtii kuma wareejin karaan entries jadwalka ama sawiro aad.
Warka wanaagsani waa in aad u badan tahay in hab karo laba hab oo ku haboon baahida aad hadda. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan sawiro iyo music, oo aad isticmaali karto doorasho iyo qeybsanaan ka SkyDrive haddii aad rabto in lagu wareejiyo fariimaha. Wax kasta oo aad doorato waxa muhiim ah in aad raacdo tallaabooyinka o dambe si looga fogaado jahawareer wareejinta fashilmay.
Habka saddex: wareejinta xogta ka Nokia in Windows Phone Effortlessly
Habkani shaqayn doonaa oo kaliya haddii il Nokia phone u shaqeeyo nidaamka daaqadaha. Mobiletrans hadda awoodi karaa inuu wareejiyo videos, muusig iyo sawiro leh oo u dhexeeya labada telefoonada Windows. Ogsoonow in xiriir wareejinta u baahan doonaan si ay u soo celiyaan Mobiletrans ka Onedrive u phone daaqadaha diirada. Tallaabooyinka soo socda ayaa hagitaan talaabo talaabo kaa caawin doontaa in hawshan gaaro.
Talaabada 1: Download iyo furi Mobiletrans Wondershare on your computer. Guji "Phone in Phone Transfer" on interface ugu weyn.
Talaabada 2: In la hubiyo in labada qalabka ku xiran yihiin your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Haddii il iyo caga telefoonada aan si sax ah kaalinta, guji "Flip" in ay si sax ah iyaga beddelaan.
Talaabada 3: Si aad u dooratid faylasha doonayo si ay u gudbiyaan, calaamadee sanduuqa ka sokow noocyada faylka dooro files ee suuqa kala iibsiga. Waxa kale oo aad kala cadeeyo karo xogta telefoonka caga adigoo "data cad ka hor inta nuqul" sanduuq ka hor wareejiyo. Haddii wareejinta xiriir la doonayo, Mobiletrans soo celin doonaa xiriirada ka Onedrive in telefoonka loo baahan yahay.
Tallaabada 4: Ugu dambeyntii, bilowdo wareejinta adigoo gujinaya "Start Copy" halka telefoonada joogo xiran tan iyo bilowgii ilaa dhamaadkii habka.
> Resource > Windows > Free Siyaabaha Demi Xogta laga Nokia in Windows Phone